စိတ်လှုပ်ရှားဖို့အကောင်းဆုံးစာပိုဒ်တိုများ - Self Help အရင်းအမြစ်များ ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ရယ်စရာကောင်းတယ် စာပိုဒ်တိုတစ်ခုဖုံးကွယ်ထားသည့်အရာအားလုံးသည်သင့်ကိုနိုးထစေနိုင်သည်, စိတ်လှုပ်ရှားမှု, ရယ်မောခြင်း, မျှော်လင့်ချက်, ထင်ယောင်ထင်မှား, ထိုစိတ်ခံစားမှုအဆုံးမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ စကားလုံးတစ်လုံးဖြင့်သင်ခံစားချက်ကိုအပြုသဘောဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေအလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်ဖော်ပြနိုင်သည်။ သို့သော်မှန်ကန်သောစကားလုံးများကိုသင်ရွေးချယ်ပါကသင်အနည်းငယ်လိုအပ်သည်ကိုပြောရန်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ စကားလုံးနှင့်အတူကောင်းသောအကြောင်းပြချက်နှင့်အမျှ "ကောင်းသောနားလည်မှု, စကားလုံးအနည်းငယ်လုံလောက်ပါတယ်။ "
ထို့ပြင်တစ်ခါတစ်ရံအလွယ်တကူရောက်နိုင်ရန်လမ်းဝန်းကျင်အဆုံးမဲ့စကားလုံးများစုဆောင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံဝါကျကိုမှန်ကန်သောစကားလုံးများနှင့်ရေးသားခြင်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ အားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောသောသူတို့အား, တိုတိုနှင့်အကျဉ်း။ နှလုံးနှင့်စိတ်တွင်စွဲမြဲနေသောထိုစကားစုများသည်ဘဝ၏ကွဲပြားသောရှုထောင့်များကိုစဉ်းစားရန်သင့်အားတစ်နည်းနည်းဖြင့်အထောက်အကူပြုသည်။
မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုရှုပ်ထွေးစေနိုင်သောဘဝကဏ္canများစွာ၊ အလုပ်များ၊ ချစ်ခင်စုံမက်ခြင်းသို့မဟုတ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာများ၊ ပိုကောင်းသောအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်သို့မဟုတ်နေထိုင်မှုအခြေအနေများရှိသည်။ ထို့အပြင်များစွာသောသူတို့သည်ဤကမ္ဘာတွင်သူတို့နေထိုင်ရသည့်အကြောင်းရင်းကိုမေးခွန်းထုတ်ကြသည်။ အဲဒီမေးခွန်းတွေအားလုံးဟာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားလူများကမျှဝေသည် ဒီလူတွေအများကြီးဟာသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစကားလုံးတွေနဲ့ဖော်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ တိုတိုနဲ့အတိုချုပ်အဖြေရဖို့သူတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကိုငိုက်ရာမှနိုးလာစေနိုင်တဲ့စကားလုံးတွေကြောင့်ပါ စကားလုံးအနည်းငယ်ကသာထိုကလစ်ကိုခံစားရရန်လုံလောက်သည် လူများစွာသည်သူတို့၏ဘ ၀ တွင်အချိန်များစွာလိုအပ်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးသည်ပြrelationshipsနာများစွာကိုတင်ပြလေ့ရှိသည်။ အကြောင်းမှာထိုသူအားလုံးသို့မဟုတ်အများစုသည်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏စိတ်ထဲဝင်ရန်နှင့်သူတို့မည်သို့ခံစားရသည်ကိုသိရန်သို့မဟုတ်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်သူတို့၏ထင်ယောင်ထင်မှားများကိုဝေမျှလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အချစ်၏အချစ် ဆက်ဆံရေးကိုမေးခွန်းထုတ်သောသို့မဟုတ်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုပိုမိုနားလည်ရန်ကူညီသောသူတို့သင်တစ် ဦး ရုန်းကန်ဆက်ဆံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများအကြားခြားနားချက်များသည်များသောအားဖြင့်စုံတွဲကွဲခြင်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ဘ ၀ နှင့်အတူမျှဝေသူအားနားလည်ရန်မလွယ်ကူပါ၊ သို့သော်သူတို့၏စိတ်နေသဘောထားကိုသင်နားလည်နိုင်လျှင်သူတို့၏စိတ်သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုအတိအကျသိရန်မလိုအပ်ပါ။
အခြားကိစ္စများတွင်လူများလိုအပ်သည် အောင်မြင်သောလူများကရေးသားစိတ်ခွန်အားနိုးထားသောစာပိုဒ်တိုများ, ရိုးရှင်းတဲ့ဝါကျအတွက်အကျဉ်းချုပ်အကြံပေးချက်များ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုစကားများမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောင်မြင်မှု၏သော့သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ရှိသည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အင်တာနက်ဟုခေါ်ဝေါ်သောစွယ်စုံကျမ်းကြီးမှတဆင့်ဖြန့်ဝေသောစာရေးသူမပါဘဲထိုစာပိုဒ်တိုများ၌တွေ့နိုင်သောသင်ယူမှုမျိုးဖြစ်သည်။
Phrases လို့ခေါ်တဲ့ဒီအပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့စကားစုအမြောက်အမြားကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်တယ် နှင့်ဘာသာရပ်အားဖြင့် cataloged ။ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကိုအထူးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ထံရေးရန်သင်သုံးနိုင်သည့်စကားစုအမျိုးမျိုးသာမကသင်လိုအပ်သည့်အခါသင်ကိုယ်တိုင်လှုံ့ဆော်ရန်ဖြစ်သည်။ ရှည်လျားပြီးငြီးငွေ့ဖွယ်ရှာဖွေမှုများကိုသင်လုပ်ရန်မလိုပါ။ Self-Help အရင်းအမြစ်များတွင်သင့်ကိုလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရွေးချယ်စရာတွေကအရမ်းများလို့၊ မင်းလိုအပ်တာကမြန်တယ်၊ ထိုစကားလုံးများကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေခြင်းသည်စွန့်ပစ်ခြင်းသို့ ဦး တည်နိုင်သည် လျင်မြန်စွာ။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ ဤ Phrases အပိုင်း၌သင်တွေ့ရမည့်မတူညီသောဆောင်းပါးများမှတစ်ဆင့်လူအများသိရှိရန်မသိရှိနိုင်သောအကြောင်းအရာအားလုံးကိုသင်အလွယ်တကူရယူနိုင်သည်။
ဤအပိုင်းတွင်သင်နှင့်မျှဝေသောထိုစာပိုဒ်တိုအချို့ကိုသူတို့ဟာကြီးကျယ်တဲ့စာပေစာရေးဆရာတွေဆီကလာတယ်။ ဒါကြောင့်လှုံ့ဆော်မှု (သို့) လှုံ့ဆော်မှုကိုရှာဖွေခြင်းအပြင်၊ ကြီးစွာသောစာရေးဆရာများကိုသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရိုးရှင်းတဲ့ဝါကျတစ်ခုကသင့်ကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံကိုပြောင်းလဲစေမယ်ဆိုရင်၊ စာအုပ်တစ်အုပ်လုံးမှာမင်းလေ့လာနိုင်တာတွေကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ။ ဒီအတွေ့အကြုံကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဟာအဆုံးမဲ့ကမ္ဘာစကားစုတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးတာနဲ့၊
por မာရီယာဟိုဆေး Roldan လွန်ခဲ့တဲ့ 10 လအတွင်း .
ချစ်ရသူတစ် ဦး ဆုံးရှုံးခြင်းသည်အမြဲလိုလိုကြေကွဲဝမ်းနည်းစရာအခိုက်အတန့်ဖြစ်သည်။ ရင်ဆိုင်ဖို့ခက်တယ် ...
ဒphilosophနိကဗေဒကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်၊ အီမန်နူဝဲလ်ကန့်သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုသင်ပိုမိုသိနိုင်သည်။ သူကဂျာမန်အတွေးအခေါ်ပညာရှင် ...
ဝေါ့ဒစ္စနီကို ၁၉၀၁၊ ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်တွင်ချီကာဂို၌မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူဟာလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်မဟုတ်ပါ…အမြဲတမ်းကြိုက်နှစ်သက်သည်
por မာရီယာဟိုဆေး Roldan လွန်ခဲ့တဲ့ 11 လအတွင်း .
ကတ္တားမှမယ်တော်ထရေဇာသည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ခွာသွားသောအခါကမ္ဘာပေါ်ရှိလူအနည်းငယ်သာဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။
ရာသီသုံးခုရှိသော်လည်းသင့်ကိုအစကတည်းကချိတ်ဆက်ထားသည့်စီးရီးတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ဒါဟာအကောင်းဆုံးစီးရီးတစ်ခုဖြစ်သည် ...